Xukuumada DDSI Oo Kulan Layeelatay Xubnaha Baarlamaanka Heer Federal Ee Deegaankeena - Cakaara News
Xukuumada DDSI Oo Kulan Layeelatay Xubnaha Baarlamaanka Heer Federal Ee Deegaankeena
Addis Ababa(CN) Khamiis, 8da October 2015, Kulan ay hogaaminayeen mas'uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo ugu horeeyo madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar, afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq, madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mowliid Haayir Xasan iyo madaxa xarunta dhexe lehna awood madaxwayne kuxigeen mudane Cabdicasiis Maxamed ayaa galabta kaqabsoomay xarunta dalkeena itoobiya ee addis ababa.
Kulankan oo ay kasoo qaybgaleen xubnihii 5tii sano ee hore deegaankeena ugu jiray xildhibaanada heer federal iyo xubnaha cusub ee 5ta sano ee soo socota ayaa ahaa mid aqoon iswaydaars, wadatashi i iyo dardaaran isugu jiray.
Aqoon iswaydaarsi iyo wadatashi qaab shaqeedka kuqotoma kadibna xukuumada ayaa kala hadashay xubnahan shaqooyinka xooga lasaarayo oo ah sii adkaynta xarunta xisbiga ee addis, xoojinta ururka horumarinta soomaalida itoobiya, abaabulka iyo wacygalinta dhalinyarada iyo ardayda jaamacadaha.
Hadaba, baarlamaanka dawlada federalka ah , ururka yehadhig iyo ururada ay bahwadaagta yihiin oo ugu horeeyo raisal wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn, raisal wasaare kuxigeenka mudane Demeqe Mokennen ayaa si diiran usoo dhaweeyay xubnaha baarlamaanka deegaankeena. iyagoo ku amaanay deegaankeena horumarka laxaadka leh iyo xidhiidhka dal iyo dibadba uu la sameeyay shacab waynihiisa. Waxayna bogaadiyeen in 24ka xubnood ee barlamaanka heer federal uga qayb galaysa deegaankeena ay 14 kamid ah dumar noqdaan oo ah mid lagu faano iyo inay deegaanada kale ku daydaan.
Arintan ayaana noqotay taariikhda markii ugu horaysay ee tiro intaa le'eg oo dumar ah ay deegaankeena iyo deegaanada kaleba uga mid noqdaan baarlamaanka heer federaal.